Kooxda Inter Milan oo qarka u saaran inay heshiis cusub ka saxiixato mid ka mid ah Xiddigaheeda – Gool FM
Kooxda Inter Milan oo qarka u saaran inay heshiis cusub ka saxiixato mid ka mid ah Xiddigaheeda
(Milan) 19 Maajo 2020. Sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Inter Milan ee dalka Talyaani ayaa qarka u saaran inay heshiiska u kordhiso daafaceeda Danilo D’Ambrosio, waxaana ay rabtaa inay gacanta u geliso qandaraas ku eg illaa sanadka 2022-ka.
Suxufiga la yiraahdo Nicoló Schira ayaa soo warinaya in Nerazzurri ay ku dhowday inay heshiiska u cusboonaysiiso 31-sano jirkaan, waxaana uu xusay in qandaraaska uu daafacan ku sii joogi doono garoonka San Siro la filayo inuu dhaqan galo todobaadyada soo aaddan.
Daafacan garabka midig ayaa heshiiskiisa haatan waxa uu ku eg yahay bisha June ee sanadka 2021-ka, waxaana xiddigan xulka qaranka Talyaaniga lagu xaddiday 12 kulan oo horyaalka Serie A ah intii uu ka hoos shaqeynayey macallin Antonio Conte xilli ciyaareedkan, isagoo sagaal kulan seegay, inkastoo uu labo jeerna dhaawac ku maqnaa.
D’Ambrosio ayaa ku dhashay Magaalada Naples, wuxuuna 3.8 milyan oo euro kaga yimid Torino bishii Janaayo sanadkii 2014-kii.
Kooxda Nerazzurri waxa uu u saftay 195 kulan, waxaana uu u dhaliyey 13 gool, isagoo u sameeyey 17 caawin muddadii uu joogay Milan.
Muxuu Michael Ballack kula taliyey xiddiga la la xiriirinayo Kooxaha Man United & Liverpool ee Kai Havertz?